टेलिकमले ल्यायो यस्यो अफर, रु. २०० मा महिनाभरि असीमित कल गर्न सकिने….(हेर्नुहोस् पुरा बिवरण) – PanchKhal Online
Home/समाचार/टेलिकमले ल्यायो यस्यो अफर, रु. २०० मा महिनाभरि असीमित कल गर्न सकिने….(हेर्नुहोस् पुरा बिवरण)
टेलिकमले ल्यायो यस्यो अफर, रु. २०० मा महिनाभरि असीमित कल गर्न सकिने….(हेर्नुहोस् पुरा बिवरण)
कम्पनीले एक विज्ञप्ति जारी गरी संस्थागत प्रयोगकर्ता समूह(कर्पोरेट युजर ग्रुप) योजना अनुसार यो सेवा प्रयोग गर्न पाइने बताएको हो
सेवा प्रयोग गर्न इच्छुक संस्थाले संस्था दर्ताको प्रमाणपत्रसहितको निवेदन नजिकको दूरसञ्चार कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ। टेलिकमका मोवाइल नम्बरसहितका समूहमा आबद्ध हुने व्यक्तिका नामावली र लिइने संस्थागत प्याकेज निवेदनमा खुलाई पेश गर्नुपर्छ।
टेलिकमका मोवाइल नम्बर नभएको खण्डमा निर्धारित महशुल लिएर ग्राहक सेवा केन्द्रले तत्कालै नयाँ मोवाइल नम्बर उपलब्ध गराउनेछ।
यो सेवामा आबद्धताका लागि प्रत्येक ग्राहकले प्रति महिना आफ्नो मोवाइल नम्बरमा सब्स्क्रिप्सन शुल्क बापत न्यूनतम प्याकेज रकम तिर्नुपर्ने कम्पनीको भनाई छ ।
प्रिपेड मोवाइलमा मात्र उपलब्ध यो सुविधा अन्तरगत प्रति महिना २ सय रुपैयाँ बराबरको संस्थागत प्याकेज लिएर समूहभित्र महिनाभरि असीमित कुराकानी गर्न सकिनेछ ।
रविलाई भेटेर निस्किएपछि दीपक र दिपाश्रीले भने- ‘रविजी नेता भएर निस्कँदै हुनुहुन्छ’
नेपाली महिला सम्झना राई बनिन्, कोरियाको पहिलो प्रहरी अधिकृत
रविलाई भेट्न भरतपुर अदालत पुगिन् निकिता